खाना वा पेय तालिकामा ल्याइएको कुनै पनि अवस्थालाई प्राय टिपको आवश्यक पर्दछ. रकम भोजनको क्रममा निर्भर गर्दछ जुन तपाईंले रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ. युरोपमा टिप्सिंगका लागि मानक प्रक्रिया भनेको बिल रकमको माथि एक वा दुई यूरो बिल छोड्नु हो यदि एक पेय तर एक खाना आदेश छैन भने।. सिट-डाउन वातावरणमा पूरा खाना फरक हुन्छ. यस मामला मा, प्रति व्यक्ति केहि युरो प्राय: पर्याप्त हुन्छ. युरोप भरका फाइभ-स्टार रेस्टुरेन्टहरूमा प्राय: तिनीहरूको बिलमा टिप समावेश गर्दछ. यो जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस् किनकि अतिरिक्त टिप छोड्नुपर्दैन जबसम्म तपाईले आफ्नो सेवाको आनन्द लिनुहुन्न. उत्कृष्ट सेवालाई कहिलेकाँही थप टिपको आवश्यक पर्दछ, त्यसैले यी मामलाहरूमा, तपाईं सबै बाटोमा जान सक्नुहुन्छ 15%.
धेरै व्यक्ति नयाँ ताजा केश प्राप्त गर्न चाहन्छन्, वा आरामदायी मसाज छुट्टीमा हुँदा. भाग्यले तपाई सबै यूरोप भर मा स्पा र स्टाइलिस्ट पाउनुहुनेछ, प्रायः सबै शहरमा. टिपिंग, कुनै पनि अवस्थामा, सामान्यतया करीव १० प्रतिशत हुन्छ. यदि तपाईले पाउनु भएको सेवाबाट तपाई अविश्वसनीय खुशी हुनुहुन्छ, तपाई जस्तो माथि जान सक्नुहुन्छ 15%.
होटलहरू प्रायः क्वेरी हुन्छन् जब यो युरोपमा टिपिंगको सवालमा आउँछ. औंठाको नियमको रूपमा, एक जहिले पनि एक यूरो दिशानिर्देश पछ्याउनु पर्छ. यसले मूल रूपमा यो भन्छ कि तपाइँ प्रति सेवामा एक यूरो छोड्नुहुन्छ. यदि घण्टी वा पोर्टरले तपाईंको झोला बोक्छ भने, त्यसोभए प्रति ब्याग एक यूरो पर्याप्त छ. घर सफा गर्न एक दिन एक यूरो प्राप्त गर्नुपर्छ. तपाईंको द्वारपाल टिपिंग तपाईंको आफ्नै विवेकमा छ, तर यो तपाइँको सेवा को स्तर मा निर्भर गर्दछ. यदि तिनीहरू माथी भन्दा पर गएका छन् तपाईंको यादगार र रमाइलो रहन सक्छ, तब पाँच देखि दस यूरो को टिप्स वा पनी पनि उपयुक्त छ.
के टिप ट्याक्सी गर्ने र यातायात
ट्याक्सी र उबेरहरू युरोपको वरिपरि हुने आन्तरिक अंश हो. के टिप छनौट गर्दा, ड्राइभरलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नु उत्तम हुन्छ. साधारणतया, हुनत, छोटो ट्याक्सी वा उबर सवारीको लागि दुई यूरो टिप उपयुक्त छ. उबर जस्ता अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई चालकलाई इलेक्ट्रोनिक टिप गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि मीटरि tax ट्याक्सीहरूलाई नगद चाहिन्छ. यात्राको क्रममा युरोपमा टिपिंग भनेको बारहरू वा रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्स गर्ने जत्तिकै हो. दिमागमा राख्नुहोस् कि यो सधैं आवश्यक हुँदैन, तर अक्सर सराहना गरियो. तपाईंको ट्रेन टिकट बुकिंग आफ्नो लागि युरोपेली यात्रा संसारमा सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइटको साथ सरल र सजिलो छ.
चाहे उनीहरूको वाइकिking उत्पत्तिमा थ्रोब्याक होस् वा साधारण सरलता, यी देशहरूले तपाईंलाई कुनै पनि सल्लाह नदिने मन गर्दछन्. धेरै जसो रेस्टुरेन्ट र सेवाहरूको टिप बिलमा समावेश हुन्छ. नगद वा क्रेडिट कार्ड मार्फत या त टिपको सट्टा नजीकको यूरोमा बिल गोल गर्न उचित छ.
ग्रीस र साइप्रस
कम्तिमा छोड्नुहोस् 5% टिप, सर्भर को लागी नगद मा, यदि बिलमा ग्रेच्युटी पनि समावेश छ. अधिकांश युरोपियन देशहरूमा नगद सधैं राजा हुन्छ, र अस्ट्रिया भन्दा फरक छैन.
आयरल्याण्ड र स्कटल्यान्डमा के सुझाव दिने
युरोपमा के गर्ने सल्लाह – ब्रिटेन
युरोपमा टिप्स लगाउनको लागि उत्तम सल्लाह भनेको तपाईंको गृहकार्य गर्नु हो. देशको बारेमा सबै पढ्नुहोस्, वा ती देशहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो याद गर्नुहोस् ट्रेन यात्रा अक्सर तपाईंलाई धेरै देशहरूमा लैजान्छ कि तपाईं मा रोक्न सक्षम हुन सक्छ. सँधै नगद ल्याउनुहोस्, दुबै सिक्का, र केही नोटहरू नगदीमा टिप गर्न. यदि तपाईं नीतिहरूमा अनिश्चित हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टहरूको लागि दश प्रतिशत नियममा अडिनुहोस्, र सबै चीजको लागि एक यूरो नियम.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “युरोपमा टिपिंग गर्नको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/e એમ્બેડ/https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#रेस्टुरेन्ट europetravel खाद्य TippingEurope रेल यात्रा traveltips छुट्टिहरु